डा. उपेन्द्र देवकोटा को छोरी अपहरणकारीलाई १७ वर्ष जेलजीवन
- नेपाली सन्देश बिहिबार, बैशाख १३, २०७५ , 9.6K जनाले हेर्नुभयो
वैशाख १२, २०७५ उच्च अदालत पाटनले डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी अपहरणमा संलग्न राजु थापालाई १७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । साथै अदालतले २६ लाख २३ हजार ५ सय १९ रुपैंयाँ जरिवाना तोकेको छ । न्यायाधीशहरु विनोद मोहन आचार्य र कृष्णबहादुर थापाको इजलासले २०७१ साल असार ३१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलामा फेरबदल गर्दै थप सजाय र जरिवाना सहितको फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला अदालतले थापालाई ११ वर्ष कैद र एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उच्च अदालतले अपहरणमा ११ वर्ष र डाकातर्फको आरोपमा थप ६ वर्ष कैद फैसला गरेको हो । २०६५ साल साउन १९ गते बिहान ३ बजे देवकोटाकी छोरी मेघाको अपहरण भएको थियो । अपहरणमा १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद र सुनका गहना लुटपाट हुनुका साथै एक करोड ३० लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाईएको थियो । ३ दिनपछि अपहरणकारीले मेघालाई राजधानीको गौशालाबाट मुक्त गरेका थिए ।
अपहरणमा संलग्न कृष्ण राई र सिद्धार्थ लामालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६९ साल माघ ६ गते ६ वर्ष कैद र डकैतीमा २४ लाख ४८ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । अपहरणका मुख्य योजनाकार राजु थापासहित राजु लामा, हेमबहादुर थापा मगर, कृष्ण राई र सिद्वार्थ लामालाई जनही ११ वर्ष कैद र एक लाख ७५ हजार जरिवाना भएको थियो ।